Kufunga Kwehutano Ziso | Kudzidzira chiGerman, Kudzidza chiGerman
musha » General Tsika » Ziso Zvehutano Ziso
Zvinhu zvinofanirwa kuve zvinoshandiswa Kuchengetedza Hutano hweZiso
Hapana mubvunzo, maziso edu, nhengo dzemuviri wedu wekuona, chimwe chezvinhu zvakakosha zvevanhu. Nekudaro, nekuda kwekushanda kwakanyanya tempo, maziso edu aneta uye mamwe matambudziko ehutano anoitika. Kuti udzivirire hutano hwemaziso, chenjedzo inofanira kutorwa kuti urege kuregeredzwa Chii chatingaite kuti tidzivirire hutano hwemaziso edu?
1. Kugara uchiongorora
Kuona kure uye pedyo hakuna kukwana kune hutano hwemaziso. Nekuti matambudziko ezvehutano eziso akasiyana zvakanyanya. Naizvozvo, zvinodikanwa kuti zviongororwe nguva nenguva uye hazvifanirwe kuregeredzwa.
2. Kuchengetedza Meso Kubva pane Chiedza Chikuru
Kune njodzi yakakura yekukuvara kwakanyanya kumeso, kunyanya muzhizha nekuda kwemhepo yakanyanya mwaranzi. Zvinonyanya kukosha kushandisa magirazi ekudzivirira maziso edu kubva kuzuva, kana iri pamhenderekedzo kana munzvimbo inodziya. Asi magirazi aya anofanira kunge akanaka. Zvikasadaro, mwaranzi yezuva inogona kuputsa zvisingaite uye inokuvadza ziso.
3. Kugeza Maoko Edu Nguva Dzose
Zvamazvirokwazvo, maoko edu ndiyo nhengo iyo inonyanya kusangana nemeso edu. Maoko edu anoratidzwa nehutachiona hwakawanda hwakasiyana uye hutachiona mukati mezuva. Uye kana tikasashamba maoko edu, maoko edu anosangana nemaziso edu anogona kukanganisa maziso edu. Kuti udzivise izvi, tinofanirwa kushamba maoko edu kazhinji.
4. Kwete Kutarisisa Kwazvo Kune Zvigadzirwa Zvemagetsi
Nekuvandudza tekinoroji, zvishandiso zvakasiyana-siyana zvetekinoroji zvakapinda muhupenyu hwedu. Asi kana uchishandisa izvi zvishandiso, maziso edu anogara achivhenekwa nemwaranzi yezvishandiso izvi. Kuti tideredze kukuvadzwa kwemarangi aya, tinofanirwa kuchengetedza chinhambwe pakati pedu nemota idzi.
Hapana mubvunzo kuti kuputa kunokuvadza maziso pamwe nemuviri wese. Kunyanya katarakita uye mavara erenji mumaziso kunogona kukonzerwa nekunyanyisa kuputa.
6. Kugadziridza Chiedza cheNzvimbo Inoshanda
Kunyanyo shanda munzvimbo isina isina mwenje yechisikigo kunogona kukanganisa hutano hwemaziso. Kuti udzivise izvi, zvinodikanwa kushanda munzvimbo yemwenje yechiedza zvakanyanya sezvinobvira. Iyi njodzi inowedzera kunyanya munzvimbo yekushanda nemakomputa. Komputa yako inofanirwa kuve neyakajeka mwero mwenje.
KUFUNGA IZVI: Ndeapi akanganisa kukuvadza muviri wevanhu?
7. Kunyatsoshandisa Kushandisa Mariro
Vanhu vanopfeka lenzi nekuda kwekunetseka kwemaziso vanofanirwa kupfeka lenzi pasi pekutarisirwa nachiremba. Malenzi anoshandiswa zvisingaite anokuvadza ziso uye anowedzera mwero wekushomeka. Uye zvakare, maoko anofanirwa kuve akachena uye hukama hwakakosha hwehutsanana hunofanirwa kuve hwakagadziriswa kana uchishandisa uye kubvisa ma lenses.
View Rafet's Full Profile akati:
30 August 2018, 14: 05
Chaive chinyorwa chakakosha pakurarama kune hutano.